Radio Don Bosco - Fanomezana ambulance avy amin'ny Papa François
Fanomezana ambulance avy amin'ny Papa François
Nanolotra fiara mpitondra marary na "ambulance" iray ho an'ny Aumônerie Apostolique misahana ny olona sahirana ny Papa François, ny marainan'ny alahadin'ny pantekôty teo.
Notsofiny rano io fiara io mialoha ny nanolorany azy ho ampiasain'ny tompon'andraikitra amin'io Aumônierie io. Natao indrindra hamonjena ireo tsy manan-kialofana miaina manodidina an'i Vatican sy ireo mipetraka amin'ireo tranotrano tsy zarizary ao Rome io fiara mpitatitra marary io. Natao ho fahatsiarovana ny vehivavy iray tsy nanan-kialofana ka namoy ny ainy teny an-dalambe, noho ny fandàvan'ny fiara mpitondra marary ny hitondra azy, izao fihetsika izao fihetsiky ny Papa nanolotra ilay "ambulance" izao. Tranga niseho tamin'ny 31 janoary 1983 io nahazo an-dramatoa Modesta VALENTI io ary efa nmisy lalana iray nampitondraina ny anaran'izy io moa ao Rome ankehitriny. Olona nahantra ka naloto io ramatoa io ary nifanilahan'ireo tompon'andriakitra tamin'ilay fiara mpitondra marary ny fandraisana azy na dia hita ho tsy salama aza izy. Nitarika ny fahaafatesany ny fahataran'ny fandraisana an-tanana azy. Efa an-taonany maro moa, tsiahivina, no miara miasa amin'ireo dispensera "fixes" sy "mobiles" eo anivon'ny Aumônerie Apostolique ny "ambulance "an'i Vatican.